VAIA2000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၂၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 2000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA2000
Rated as the No. 1 water filtration product in Vietnam, 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System using autovalve stainless steel filter column has been and is being used by many domestic and foreign customers
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နံပါတ် ၁ လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာနဲ့ အညီ စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ကို ပြည်တွင်းရော ပြည်ပက ဝယ်ယူသူများကပါ သုံးစွဲကြပါတယ်။
While life is increasingly modern, science and technology develop, the speed of urbanization and industrialization is higher and higher, which leads to rapid increase in water pollution. Therefore, purified water is selected to be used as an effective solution to protect the health of yourself and your family, to remove toxins and impurities that are harmful to the body in drinking water. to drink.
တဖြည်းဖြည်း သိပ္ပံနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာနဲ့အညီ ရေကို ညစ်ညမ်းစေတဲ့ စက်ရုံတွေ ပိုပိုပြီး ပေါများလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေသန့်ကို သင်နဲ့ သင့်မိသားစုရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန် သောက်သုံးဖို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရေထဲမှ အဆိပ်အတောက်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Currently on the market there are many brands providing products specializing in purified industrial water purification with full models and applications of different filtration technologies, making it difficult for users to choose. However, Viet An thinks that with information about the outstanding water filtration capacity of 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System - Vietnam's leading water purification product, with the application of modern RO water purification technology for the finished water is water. With the standard of QCVN 6-1:2010/BYT standard of Ministry of Health, customers will easily be able to decide which water purification products to buy for their family or production facilities.
ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာ မော်ဒယ်မျိုးစုံ နည်းပညာမျိုးစုံနဲ့ ရေသန့်စက်မျိုးစုံကို ရောင်းချတဲ့ တံဆိပ်တွေ များပြားလာတဲ့အတွက် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲပလည်း ရွေးချယ်ရ ခက်ခဲလာပါတယ်။ သို့သော်လည်း Viet An ရဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ထိပ်တန်းရေသန့်စက်ဖြစ်တဲ့ 2000LPH VAIA2000 က ခေတ်မီသော RO ရေသန့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် စစ်ပြီးတဲ့ ရေကို သန့်စင်စေပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့အညီ ဝယ်ယူသူတွေက ဘယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
The optimum water filtration capacity of 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
When confirmingagood water filtration product or not, it must be said that the water filter ability of that product. 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System will bring youasource of ultra-clean, ultra-pure water because this filtration system itself is applied RO filter technology with RO membrane filter with the smallest size of micro filter slot in all. both types of filters today. The filter slot size of the RO membrane is only about 0.0001 micro meter, so when the water treatment is done, only water molecules can pass through the RO membrane and 99.9% metal ions, impurities, virust. , harmful bacteria will be trapped and eliminated through wastewater. The output water after the purification process is purified water that meets the QCVN 6-1:2010/BYT standard of Set Health that can be drunk directly without boiling.
ကောင်းတဲ့ ရေသန့်စက်ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုနေချိန်မှာ ဒီရေသန့်စက်ရဲ့ အရည်အသွေးအကြောင်း ပြောပြပါမယ်။ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်က အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ ရေကို ယူဆောင်လာပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီစက်က အသေးဆုံး အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့ RO အလွှာပါး ရေစစ်နဲ့ RO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွှာပါးရဲ့ ရေစစ်အရွယ်အစားက ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာပဲ ရှိတဲ့အတွက် ရေကို ပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါ ရေမော်လီကျူးတွေကသာ ဖြတ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၉၉.၉%သော အိုင်ယွန်း၊ အညစ်အကြေး၊ ဗိုင်းရပ်၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ချန်ထားခဲ့ပြီး ရေဆိုးထုတ်မြောင်းထဲ စွန့်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ထားတဲ့ ရေသန့်က ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT နဲ့ ညီတာကြောင့် ကျိုချက်စရာ မလိုဘဲ တိုက်ရိုက် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
In addition, with the continuous improvement and improvement, 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System also hasaMineral Set, which will supplement minerals that are beneficial to the body, so pure water hasacool taste, easy to drink. and good for your health.
ထို့အပြင် တိုးတက်ပြီးရင်း တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ဖြည့်ပေးတဲ့ သတ္တုဓာတ်အတွဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေသန့်က အေးမြတဲ့ အရသာ ရှိကာ သောက်သုံးရ လွယ်ကူပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System - purifies pure water fromavariety of water sources
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်- ရေအရင်းအမြစ်မျိုးစုံကို သန့်စင်ပေးသည်
When you choose to buya2000 liter / h RO water filtration system using autovalve stainless steel column, you will ownasuper product with the ability to filter and treat water. This device is capable of filtering almost all current water sources such as river water, well water, rain water, alum water, tap water ... to create pure clean water, so it will meet the demand. diversity of users.
သင်က အော်တို စတိန်းလက်စ်စတီး ကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့ တစ်နာရီမှာ ၂၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ RO ရေစစ်ကို ဝယ်ယူဖို့ ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင်က ရေစစ်ပြီး ရေကို ပြုပြင်ဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဒီစက်က မြစ်ရေ၊ တွင်းရေ၊ မိုးရေ၊ ကျောက်ချဉ်ရေ၊ ဘုံပိုင်ရေ စသဖြင့် ရေအရင်းအမြစ် အားလုံးလိုလိုကို ရေသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာ အသေအချာပါပဲ။
With the diversity and not picky about the water source for this treatment, 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System has affirmed its position in the hearts of users, confirming why this is always the top water purification product you should choose to use
ရေသန့်စက်တွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အမျိုးအစား ကွဲပြားတာသော်လည်း 2000LPH VAIA 2000 ရေသန့်စက်က ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ နေရာယူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သင်လည်း ဒီပစ္စည်းကို အသုံးပြုဖို့ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System Giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်
When you use Viet An's 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System, you will have pure water to use, your body will be completely protected from common diseases originating from polluted water sources. For example dysentery, helminthiasis, typhoid, cholera, hepatitis, dermatitis, gastrointestinal disturbances and even the most severe may be cancer ..
Viet An ရဲ့ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင်က ညစ်ညမ်းတဲ့ ရေအမျိုးမျိုးကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရောဂါမျိုးစုံမှ ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ အသဲရောင်ရောဂါ၊ အရေးပြားရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးကတော့ ကင်ဆာရောဂါပါ။
All virust, amoebic bacteria, impurities, toxins such as arsenic, substances harmful to human health dissolved in water will be eliminated by RO membrane used in the filtration system. this VAIA2000 purified RO water. So that your health will be protected as much as possible.
ရေထဲမှာ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်၊ ရောဂါဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယား၊ အဆိပ်အတောက်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများကို ရေစစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ RO အလွှာပါးက ဖယ်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြော်င့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Use 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System -asolution that saves money for you
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်-သင့်အတွက် ပိုက်ဆံချွေတာဖို့ အဖြေ
Normally, the price forabottle of purified water you buy is from 4000-5000 VND per 500ml bottle. That needs each person every day to load the body from 1.5 to2liters of water to maintain all body activities in the best way. So every day, it costs 15 to 20,000 VND to buy purified water. If the number of people is large, the cost to buy purified water to serve the needs of food will increase very high. Instead of having to pay this cost, now when you install 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System using stainless steel autovalve column, you will have pure water drinking directly at the tap but the cost is much more economical than the buy water bottles, water bottles outside.
ပုံမှန်အားဖြင့် 500 ml ရေသန့်ဘူးတစ်ဘူးကို ဗီယက်နမ်ငွေ ၄၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ အတွင်း ပေးဝယ်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွက်ဆို တစ်နေ့ကို ရေ ၁.၅ လီတာမှ ၂ လီတာထိ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် ရေသန့်ဝယ်ရန် ဗီယက်နမ်ငွေ ၂၀၀၀ ကျသင့်ပါတယ်။ လူဦးရေတွေ တိုးပွါးလာတာနဲ့အမျှ ရေကို ဝယ်ဖို့ ကျသင့်ငွေကလည်း မြင့်လာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ဝယ်ယူနေမယ့်အစား စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုအဆို့ကို အသုံးပြုထားတဲ့ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဘုံပိုင်မှာတင် သောက်ရေသန့်ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ရေသန့်ဘူးကို ဝယ်ရတာထက် ပိုပြီး စီးပွါးရေး ဆန်ပါတယ်။
The amount of wastewater after the filtration process can also be reused for other purposes such as laundry, watering plants, house cleaning ... So when using 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System you can save There isalot of cost but there isawater source that meets the standards of use
ရေစစ်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ စွန့်ပစ်ရေတွေကို အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ အပင်ရေလောင်းခြင်း၊ အိမ်သန့်ရှင်းခြင်း စသဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံလည်း ချွေတာနိုင်သလို အသုံးပြုဖို့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System - The longest used filtration system
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်- အကြာရှည်ဆုံး အသုံးပြုနို်င်သော ရေစစ်
Product's using life is alwaysamatter of great concern. With the specialized filtration system, also produces pure water. With the system of components imported directly from the UK, the US, the Netherlands, Korea ... with high durability, ISO 9001:2015 production standards use high-grade 304 stainless steel filter column, so the water filtration process system is always stable, the service life of the system can be up to 15 years - and this is the oldest filtration system today.
စက်ရဲ့ သက်တမ်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ စပါယ်ရှယ်စနစ်နဲ့ ရေသန့်ကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကြာရှည်ခံသော UK, US, Netherlands, Korea တို့မှ တင်သွင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်မီတဲ့ အဆင့်မြင့် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ရေစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်က တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ဆားဗစ်သက်တမ်းကလည်း ၁၅ နှစ်ထိခံပြီး ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အကြာဆုံးသက်တမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
If you want to immediately own this 2000LPH VAIA2000 Purified Water Filtration System, go to the nearest Viet An branch for free product consultation.
တကယ်လို့ သင်က ဒီ 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စက်ကို ချက်ချင်း ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ Viet An ရုံးခွဲကို သွားလိုက်ပါ။
Hanoi address: No. 10 - N6, Lane 40, Xuan La Street, Tay Ho District,
Hanoi.Hanoi လိပ်စာ: No. 10 - N6, လမ်း 40, Xuan La လမ်း, Tay Ho ဒေသ, Hanoi.
ရုံးလိပ်စာ: Phu Huu Hamlet၊ Thanh Lam ကြေးရှာ၊ Me Linh dist၊ Hanoi, Vietnam
Saigon address: 66 An Phu Dong Street 9, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Saigon လိပ်စာ : 66 An Phu Dong Street 9, An Phu Dong Ward၊ ခရိုငျ ၁၂၊ ဟိုခြီမငျးစီးတီး
Address of Da Nang: 50 Phan Khoang, Phuoc Ly Resettlement Area, Hoa An, Cam Le District, City.
DanangDa Nang လိပ်စာ: 50 Phan Khoang, Phuoc Ly ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဧရိယာ , Hoa An, Cam Le ဒေသ, မြို့. Danang
Buon Me Thuot address: 87 Phan Huy Chu, P.Khanh Xuan, Buon Ma Thuot City
Buon Me Thuot လိပ်စာ: 87 Phan Huy Chu, P.Khanh Xuan, Buon Ma Thuot မြို့
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ2unit
18 RO membrane ROအလွှာပါး 1 unit Hitech-USA/CSM Korea
27 20” stainless steel filter housing စတိန်းလက်စ်စတီးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်